पत्रकार महासंघ ताजा मत परिणाम- अध्यक्षमा विपुल पोखरेलको अग्रता कायमै, कति मतले पछाडि छिन् निर्मल शर्मा ? — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको गत बुधबार सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना जारी छ ।
शुक्रबार अवेर राति सार्वजनिक ५५ जिल्ला र प्रतिष्ठान प्रदेशको मतपरिणाममा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष), मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीलगायत दलनिकट पत्रकार संगठनको गठबन्धनबाट गठबन्धनबाट केन्द्रीय अध्यक्षमा विपुल पोखरेलले अग्रता कायमै राखेका छन् ।
कुन पदमा कसको अग्रता ?
पत्रकार महासंघको निर्वाचन पहिलोपटक प्रत्यक्ष प्रणालीबाट भएको हो । यो निर्वाचनमा अध्यक्षमा विपुल पाखरेल, निर्मला शर्मा र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा गजेन्द्र बुढाथोकी प्रतिस्पर्धामा छन् । तर बुढाथोकी पोखरेल र शर्माभन्दा धेरै पछि छन् ।
यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेशको अध्यक्षमा श्रीजन झा र महासचिवमा टेकबहादुर रोका (टेनिस) निर्वाचित भएका छन् । गत २५ चैतमा सम्पन्न निर्वाचनको मतपरिणाम अनुसार झाले १ हजार १ सय ६५ मत ल्याएर विजयी बने भने उनका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र खड्काले ५ सय ७ मत प्राप्त गरे ।